Unoziva here fungidziro yemazuva ano yeiyo Economist Intelligence Unit chinzvimbo chehupfumi hwakakura hwenyika hwashanduka zvakanyanya pasi pesimba rezvinhu zvakawanda senge COVID-19 denda. Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi. | Jesson
My Orders Login Bhalisa
Unoziva here fungidziro yemazuva ano yeiyo Economist Intelligence Unit chinzvimbo chehupfumi hwakakura hwenyika hwashanduka zvakanyanya pasi pesimba rezvinhu zvakawanda senge COVID-19 denda. Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi.
1. China yakapa rubatsiro rwejekiseni kunyika makumi mashanu nenhatu dzichiri kusimukira uye yakatumira kunze kwenyika uye irikutumira mishonga yekudzivirira zvirwere kunyika makumi maviri nembiri. Mushure mekusvitswa kwekutanga kwekudzivirira kwe COVID-19 kuPakistan, jekiseni re COVID-19 rakabatsirwa neChina kuCambodia neLaos rasvika munyika mbiri idzi. China ichaendesa zvakare majekiseni kune dzimwe nyika imwe mushure meimwe.
2. Ministry yeJapan yeHutano neVashandi: muna 2020, huwandu hwekuzvarwa muJapan hwakaderera ne2.9% kubva panguva imwechete gore rapfuura kusvika 872700, rekodhi yakaderera kwemakore mashanu akateedzana; huwandu hwevakafa hwaive 1.3845 mamirioni, pasi 0.7% kubva pagore rapfuura kekutanga mumakore gumi nerimwe.
3. Mushure mezororo reMutambo weChirimo, mitengo yezvokudya yemuno muSouth Korea yakaunza kutenderera kutsva kwekukwira kwese-kwese. Mutengo wemiriwo wawedzera zvakanyanya, iwo mutengo wehanyanisi girini wakawedzera zvakapetwa kubva panguva imwecheteyo gore rapfuura, mutengo wemadomasi nehanyanisi wakakwira neanopfuura makumi masere muzana, uye mutengo wemupunga wakakwirawo neinenge 20% zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura. Hurumende yeSouth Korea yakati ichaburitsa mamwe matani zviuru makumi matanhatu emupunga mumatura munguva pfupi iri kutevera, uye nekushingairira kutsigira varimi vemiriwo vekumba kuti vawedzere kugadzirwa kwemiriwo; panguva imwechete, zvinoenderana nekukwira kwemitengo yezviyo, kudzikisa mitengo yekunze kune zvimwe zvirimwa; kuburikidza neyakagadziriswa mhinduro mhinduro kuti iwedzere kugadzikana kwemutengo.
4. Sangano reEconomist Intelligence rakaburitsa fungidziro yazvino yekumisikidza hupfumi hukuru hwenyika. Zvichienzaniswa ne2019, chinhanho chenyika dzepasi rose hupfumi chakaramba chisina kuchinja muna 2021, kuchiteverwa neUnited States, China, Japan neGerman; yechishanu nerechitanhatu, India neUnited Kingdom vakadzosa huwandu hwacho; uyezve, Brazil yakadonha kubva pamusoro gumi. South Korea iri zvakare pamusoro gumi uye yepfumbamwe.
5. New York City yakaratidza nguva chaiyo yemabhaisikopo kuti itangezve kekutanga kubva pakatanga coronal pneumonia. Ma cinema ese achavhurwa munaKurume 5 pakutanga. Kudzivirira denda, mafirimu ese muNew York City, sedzimwe nzvimbo dzakavhurwa dzemafirimu muNew York State, dzinongobvumidza kupinda kwe25%, uye vanhu vasingadarike makumi mashanu vachabvumidzwa mune imwe horo huru yekuongorora iyo cinema.
6.Kuputika kwefuruwenza muEurope kwakonzera kukwira kwemitengo yemazai munyika zhinji dzeEurope. Poland, mugadziri mukuru wehuku weEU uye wechitanhatu pakukura mazai, akaunganidza huku dzinosvika mamirioni mashanu, kusanganisira huwandu huku huku. Wholesale mazai emazai muPoland akasimuka ne18% kusvika 20% pakupera kwaNdira. Uye zvakare, mitengo yemazai muFrance, Germany nedzimwe nhengo dzeEU dzakakwirawo kusvika pamatanho akasiyana.
7. [US Securities Regulatory Commission] kutanga muna Kukadzi 25, 2021, iyo US Securities Regulatory Commission muripo (inobhadhariswa kutengesa maoda chete) ichaderedzwa kubva pa0.00221% kusvika pa0.00051%.
8. Kufanotaura kuchangobva kuitika pachinhanho cheEconomist Intelligence Unit cheupfumi hukuru hwenyika kwakashanduka zvakanyanya pasi pesimba rezvinhu zvakawanda senge denda reCOVID-19. Zvichienzaniswa ne2019, chinhanho chenyika dzepasi rose hupfumi chakaramba chisina kuchinja muna 2021, kuchiteverwa neUnited States, China, Japan neGermany, nepo India yakadonha kubva pavashanu vepamusoro uye yakatorwa neUK. Zvinoenderana nemaitirwo azvino, hupfumi hweIndia huchapfuura zvakare hweUK, zvirinani kusvika gore ra2026. India ndiyo hupfumi hukuru hwakakundwa zvakanyanya nedenda iri, uye vanhu vanosvika mamirioni mazana maviri vangangodzokera muhurombo.
Japan Institute of Real Estate Economics: muna 2020, avhareji mutengo wekutengesa wemafurati achangovakwa muJapan wakakwira 3.8% gore pagore kusvika 49.71 mamirioni yen, ichisvika kwese-kwakakwira kwenguva ina makore akateedzana. Ichikanganiswa nedenda, makambani eJapan ezvivakwa akamisa kutengesa panguva yedambudziko, saka huwandu hwekutengesa kwemafurati muJapan hwakaderera ne15.2% gore-ne-gore kusvika kumayuniti 59900 muna 2020, yakaderera kubva 1976. Kunyangwe ichidonha kutengesa, makore yekukwira kwemitengo yepasi uye kukwira kwemitengo yevashandi kwakatsigira mitengo yepamusoro yeimba.
Post nguva: Kukadzi-26-2021